Azonao atao izao ny mamafa ny sary sy horonan-tsary WhatsApp amin'ny iPhone miaraka amin'ny dingana iray | Vaovao momba ny gadget
Azonao atao izao ny mamafa ny sary sy horonan-tsary rehetra avy amin'ny WhatsApp amin'ny iPhone amin'ny dingana iray
WhatsApp vao nohavaozina ny fampiharana ny fitaovana iOS anao amin'ny kinova 2.17.1Raha mbola tsy nahazo ny fanavaozana ianao, izay mety eny, dia horaisinao anio. Anisan'ireo zava-baovao mahaliana indrindra ao, dia tokony homarihina fa afaka izao ianao mandefa hafatra ivelan'ny seranana na dia, mandra-pifandraisanao amin'ny Internet aza dia tsy halefa any amin'ireo mpizara lozisialy izy ireo ary aorian'izay any amin'ny mpandray azy.
Faharoa, tsy maintsy miresaka momba ny fiasa vaovao iray izay azo antoka fa ho tian'ny mpampiasa rehetra izay mampiasa ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza amin'ny fitaovana iray misy iOS miaraka amin'ny iPhone. Noho ity fanavaozana ity dia ho azon'izy ireo atao izao fafao ny sary sy horonan-tsary rehetra izay noraisin'ny WhatsApp tamina dingana iray, zavatra izay hamonjy fitadidiana betsaka ary ambonin'izany rehetra izany dia manaala toerana haingana.
WhatsApp ho an'ny iOS izao dia mamela anao hamafa sary sy horonan-tsary eo amin'ny sehatry ny chat.
Amin'ny maha-antsipiriany azy dia lazao aminao fa io fampiasa io dia mamela anao hamafa ireo rakitra rehetra voaray tamina resaka WhatsApp, ka raha manana maromaro ianao na ny atin'ny fifampiresahana maro no tianao hamafa dia tsy maintsy mandeha tsirairay ianao. Mba hanaovana izany dia mila miditra fotsiny ianao amin'ny sehatry ny chat manokana ary afaka mamafa ny atiny rehetra ianao. Azonao atao ihany koa ny manao azy avy amin'ny rindranasa fikirakirana ny telefaona tenany manokana, ao amin'ilay faritra Fampiasana sy fitehirizana angona.
Farany mariho fa navela izao izy ireo mandefa hatramin'ny 30 sary ao anaty hafatra iray, zavatra tena ilaina indrindra indrindra raha te handefa ny sariny amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana, namana na mivantana amina vondrona iray ianao, amin'ny hetsika na zavatra manokana izay nanjo anao tamin'ny fotoana iray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Azonao atao izao ny mamafa ny sary sy horonan-tsary rehetra avy amin'ny WhatsApp amin'ny iPhone amin'ny dingana iray
Ny fahatsiarovana ny Samsung Note 7 dia tsy nisy fiatraikany tamin'ny tombom-bolan'ny orinasa